About us - Renqiu City Shuangkun Imishini Izingxenye Co., Ltd.
I-Renqiu City Shuangkun Machinery Parts Co., Ltd.
Isungulwe ngo-1995, I-Renqiu City Shuangkun Machinery Parts Co., Ltd. ingumkhiqizi osebenza kahle futhi othumela izinto emazweni angaphandle ophathelene nokwakhiwa, ukuthuthukiswa nokukhiqizwa kwe- sprocket, igiya futhi i-flange.Ukuze wanelise kangcono ukufunwa kwamakhasimende, setha i-Renqiu Yizongxi Trading Company ukusiza amakhasimende athenge ezinye izingxenye zezithuthuthu. Yonke imikhiqizo yethu ihambisana namazinga ekhwalithi aphesheya futhi ayaziswa kakhulu ezimakethe ezahlukahlukene emhlabeni jikelele.
Ukumboza indawo engamamitha-skwele ayi-15000, manje sinabasebenzi abangaphezu kwe-120, siziqhayisa ngenani lokuthengisa lonyaka elidlula i-USD 10 million futhi njengamanje lithumela u-80% womkhiqizo wethu emhlabeni jikelele.
Izikhungo zethu ezihlome kahle nokulawulwa kwekhwalithi okuhle kuzo zonke izigaba zokukhiqiza kusenza sikwazi ukuqinisekisa ukwaneliseka kwamakhasimende okuphelele, ngaphandle kwalokho, sithole isitifiketi se-ISO9001.
Njengomphumela wemikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme kanye nokuhlinzekwa kwamakhasimende okuvelele, sithole inethiwekhi yokuthengisa yomhlaba wonke efinyelela eYurophu, eNingizimu Melika, e-Southeast Asia, Middle East nase-Afrika.
Singasiza ukwenza ibhizinisi lakho libe ngcono.
SHUANGKUN isekela impumelelo yamakhasimende ethu kanye nabamele ngokuletha i-sprocket yegiya nekhwalithi ngendlela efike ngesikhathi nangendlela enonembeza, nokugcina ubudlelwane obunokwethenjelwa nobunesizotha nabalingani bethu.
Isevisi yangaphambi kokuthengisa: Ukubonisana ngebhizinisi okuhlanganisiwe kanye nensizakalo yamahhala yokwakha Nikeza ngemikhiqizo ehlukile yekhwalithi yokusetshenziswa kwamakhasimende futhi usize amakhasimende ukuthola ikhambi elingcono kakhulu ngokuya ngesipiliyoni semakethe yethu
Ngaphansi kwensizakalo yenkontileka: Ukusebenza ngokuqinile kokulawulwa kwekhwalithi ye-ISO, ukulethwa ngesikhathi esifanele, ukuhleleka kokuphathwa kwempahla kanye nokuxhaswa okuhle kwezezimali.
Isevisi yangemva kokuthengisa: Sizothatha intshiseko eyi-100% ukuxazulula nokwakha isigidi sephutha elingaba khona ngesikhathi esifanele.
Konke esikwenzayo, ukunciphisa izindleko zakho zokuthenga nezokulungisa, namandla okuncintisana emakethe kwasendaweni. Insizakalo ephelele ye-SHUANGKUN, izokusindisa umthwalo omningi womsebenzi futhi ikulethele isipiliyoni esijabulisayo.
Insizakalo ye-VIP yakho
1. Alikho i-oda elincane, alikho ikhasimende elincane, wonke amakhasimende ayikhasimende le-VVVIP kithi.
Hhayi ikhasimende kuphela kepha nomlingani webhizinisi. I-SHUANGKUN izonikela ngokusekelwa okugcwele ekunwebeni kwebhizinisi lakho.
2. Isevisi esheshayo: Isevisi eku-inthanethi engama-24 phendula imibuzo yakho ngesikhathi sokuqala.
Ikhotheshini kanye nenketho kuzonikezwa ngokushesha okukhulu uma usuthole uphenyo lwakho.
3. Isiphakamiso sobungcweti: ngokwesimo sakho sokusebenza, sinikeza izinketho ezifanele kakhulu ekukhetheni kwakho, futhi sinamathela ekunikezeleni umkhiqizo owenziwe ngezifiso.
Ukuxhumana okuhle: Abasebenzi bezokumaketha abafunde kakhulu bonke abane-English Grade Certification (TEM4 Test ye-English Majors-4 noma i-CET6 College English Test-6 ngenhla).
5. Ngokuqinisekile uma ukhuluma isiRashiya, isiFulentshi noma iSpanishi, abahumushi bethu abakhethekile bakunikeza insizakalo esondelene kakhulu.
6.Isipiliyoni Sebhizinisi: Konke ukuthengisa okunesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-3 sokuthekelisa, okujwayelene nenqubomgomo yokuthekelisa kanye nenqubo yokungenisa kukazwelonke, kukusiza ukuthi wenze inkambiso yokungenisa nenqubo yokungenisa ngokushelela.
Selokhu yasungulwa, inkampani iqhubeka nokuphila ngokukholelwa kulokhu: "ukuthengisa okuthembekile, ikhwalithi engcono kakhulu, ukuthanda abantu nokuzuza kumakhasimende."
Sibheke phambili ekwakheni ubudlelwano bebhizinisi obuyimpumelelo namakhasimende amasha emhlabeni wonke kungekudala.